Tanjombato : Trano valo noravana noho ny ady tany
Fandravana trano no niafaran’ny ady tany teny amin’ny teratany vahiny iray sy ireo olona nipetraka tamin’ilay tany eny Tanjombato.
"Olana teo amin’ny fivarotana ny ampahan’ilay tany no tena fototry ny olana", araka ny voalazan’ireo tompon’ny trano voarava.
"Ny renibenay no nivarotra ny ampahany tamin’ilay tany. Taty aoriana dia novain’ilay mpividy ny antontan-taratasy ka lasany ny tany. Efa am-polony taona izao no nandroahany any teto, saingy tsy tanteraka izany raha tsy androany", hoy Razafisoloniaina Marie Angeline, iray tamin’ireo tompon’ny trano rava.
"Manatanteraka didim-pitsarana no ataonay eto. Tsy azo tanterahina ny didim-pitsarana raha tsy efa nampahafantarina ilay olona voakasika", hoy Delci Sandra, vadintany tonga teny an-toerana nitondra ilay didm-pitsarana.
Vao maraina omaly dia efa tonga teny an-toerana ilay vadintany niaraka tamin’ny mpitandro ny filaminana nanatanteraka ilay didy nivoaka. Nilaza ireo tompon’ny trano fa tsy hijery fotsiny izao tranga izao fa hametrka fitoriana.